Kahortagga Coronavirus ee Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirKahortaga Coronavirus ee Gaadiidka Dadweynaha ee İzmir
07 / 03 / 2020 35 Izmir, Tareenka Tareenka, tareenka, Turkish Aegean, SAWIRADA, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
cufnaanta gaadiidka gaaska coronavirus ee izmir
Howlo nadiifin gaar ah ayaa laga bilaabay magaalada inzmir si loola dagaallamo fayrasyada xarumaha dadweynaha.
Ka sokow howlaha joogtada ah ee nadaafadda ee ka socda metrooga, taraamka iyo basaska Izmir, ka hortaga viruska iyo bakteeriyada ayaa sidoo kale la bilaabay. Ilaalinta Deegaanka iyo Maareeyaha Laanta Kontoroolka Deegaanka Izmir ee Dowlada Hoose markii ugu horeeysay kadib markii howlaha nadaafadda ay ka shaqeeyaan 182 gaari oo kuwa xamuulka ah oo ka kooban 38 metro iyo 220 gawaarida taraamka ah. Isla shaqada ayaa lagu qabtay saldhigyada metrooga iyo joogsiyada taraamyada.
Agaasinka Guud ee ESHOT wuxuu ka bilaabay hawlo nadiifin ah qiyaastii 1450 bas oo bixiya gaadiidka dadweynaha maalin walba.
Waxyeello u geysaneysaa caafimaadka
Kiimikooyinka ku saleysan biyaha waxaa loo isticmaalaa fayraska iyo ka saarista bakteeriyada. Waxyaabaha kiimikada ah ee aan waxyeellada u laheyn caafimaadka bini-aadamka iyo bay'addaba kama baxaan wasaqda. Daraasaddan, oo loo bilaabay in laga hortago cudurka halista ah ee cudurka dilaaga ah ee corona, ayaa sidoo kale laga fuliyaa dhammaan iskuulada ku yaal Izmir.
İZDENİZ sidoo kale way sameyn doontaa
Si la mid ah shaqada nadaafadda gaarka ah ee lagu bilaabay gawaarida dadweynaha ee dhulka, waxaa sidoo kale lagu sameyn doonaa gawaarida badda ee ay leedahay Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir IZDENIZ Agaasinka Guud. Toddobaadka soo socda, hawl nadiifin gaar ah ayaa laga bilaabi doonaa dhammaan faylasha iyo bakteeriyada dhammaan maraakiibta oo arjiga ayaa loo sii wadi doonaa si joogto ah loo qabto saacadaha shaqada ka baxsan.
Nadiifinta habeenkii ee gaadiidka dadweynaha
Hawlaha nadaafadda waxaa lagu qabtaa habeen kasta ganacsiyada İZBAN, Metro, Tram, ESHOT iyo İZDENİZ. Kooxo khaas ah oo wata shahaadooyinka nadaafadda iyo nadaafadda ayaa nadiifiya kuraasta, sagxadaha musqusha, nadiifi daaqadaha iyo dhinacyada dhinacyada baabuurta dadweynaha. Gacanta, warqadaha gacanta iyo galka gacmaha ee rakaabka ay la xiriiraan sidoo kale waa la jeermiyay. Dhamaan howlahaan, TSE waxay ansixisay alaabada nadiifinta ee aan waxyeelada u laheyn caafimaadka aadanaha ayaa loo isticmaalaa.
Tareennada İZBAN waa la nadiifiyaa oo la nadiifiyaa maalin kasta inta u dhaxaysa 01.30-05.30 goobta aqoon isweydaarsiga ee Çiğli, Aliağa, Menemen, Cumaovası, Torbalı, Tepeköy iyo Selçuk saldhigyada. Miirayaasha hawo qaboojiyaha ayaa la nadiifiyaa labadii toddobaadba mar, oo ay taageeraan ur uumiyaha qaboojiyeyaasha bakteeriyada ka hortaga.
182 tareenka dhulka hoostiisa ah iyo 38 gawaarida taraamka ayaa sidoo kale si otomaatik ah loogu maydhaa qaybta dharka nadiifinta burushka maalin kasta; dheecaanka jeermiska jeermiska ayaa la soo qaatay oo loo diyaariyey in lagu hawlgalo. Qalabka sida guntin gacmeedka, gacanta ayaa laga saaraa waqti go'an oo si nadiif ah ayaa loo nadiifiyaa.
Dhaqidda ka badan 1400 oo bas ayaa laga fuliyaa toddobo garaash oo ku yaal magaalada, qeybaha lagu dhaqo dib loo warshadeeyo. Basasku sidoo kale waxay marayaan jeermis-dilis laba toddobaad kasta.
Maraakiibta gudahooda İZDENİZ, nadaafadda iyo hanaan-jeermis-ka-dilis ayaa lagu qaadaa habeen kasta laga bilaabo saacaddu markay tahay 23.00. Kuraasta, wiishashka, sagxadaha, quraaradaha iyo sagxadaha dhinacyada, gogosha, biraha gacmaha lagu qaato, musqulaha iyo weelka musqulaha ayaa sidoo kale la nadiifiyaa.
Cabbirka Coronavirus ee Gaadiidka Dadweynaha ee Alanya
Imtixaanka gaadiidka gaadiidka dadweynaha ee Izmir
Qeybta 10 oo loo sameeyey Gaadiidka Dadwaynaha ee Izmir ayaa galay Xoog
30 Boqolkiiba Hoos u dhigis Isticmaalka fayraska ee Gaadiidka Dadweynaha ee İzmir
Tirada Dadka Isticmaalaya Gaadiidka Dadweynaha ee İzmir Waxaa hoos u dhacay 51,3 Boqolkiiba
Codsiga Kursiga cagaaran wuxuu ka bilaabmay Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir
Kizilay-Dikmen Qiyaasta amniga sare waxaa loogu talagalay line-ka khadka caarada
Cabbiraadda iftiiminta Dhimashada Dhimashada
Ka hortagga bamamka ee Metrobus ayaa joojiya
Cabirka KPSS ee Samucha
Qiyaasta X-Ray ee Marmaray
Tan iyo markii mashruuca taraafikada nostalgic uu bilaabmayo isaga oo aan la wareegin cabbirka saadaasha hawada, Bursa
Gaadiidka dadweynaha Izmir
Wadooyinka Dolmus iyo Minibus Waxaa Lagu Wareejin doonaa Samsun